Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.2 Big data
Big data na-kere na-anakọtara site ọchịchị n'ihi nzube ndị ọzọ karịa nnyocha. Na iji data na-emere nnyocha, ya mere, na-achọ repurposing.
An idealized ele elekọta mmadụ research chere na a ọkà mmụta sayensị na-enwe ihe echiche na mgbe obon data iji nwalee na echiche. Nke a style nke nnyocha na-eduga ná a uko kwesịrị ekwesị n'etiti research ajụjụ na data, ma ọ bụ mmachi n'ihi na otu onye na-eme nchọpụta na-enweghị ihe onwunwe dị mkpa na-anakọta data ha mkpa, dị ka nnukwu, ọgaranya, na mba-anọchite anya data. Ya mere, a otutu elekọta mmadụ nnyocha na n'oge gara aga ji nnukwu-ọnụ ọgụgụ na-elekọta mmadụ nnyocha ndị e mere, dị ka General Social Survey (GSS), na American National Election Study (ANES), na Panel Study of Income Dynamics (PSID). Ndị a ọnụ ọgụgụ buru ibu nnyocha e mere na-adịkarị na-agba ọsọ site na otu nke na-eme nnyocha na ha na-e kee data na ike ga-eji ọtụtụ ndị na-eme nnyocha. N'ihi na n'ime ihe mgbaru ọsọ ndị a nnukwu-ọnụ ọgụgụ nnyocha ndị e mere, oké nlekọta na-etinye n'ime emebe na data collection na-akwadebe dapụtara data maka site na-eme nnyocha. A data ndị na site na-eme nnyocha na-eme nnyocha.
Kasị na-elekọta mmadụ nnyocha iji dijitalụ afọ na isi mmalite, Otú ọ dị, bụ fundamentally dị iche iche. Kama iji data anakọtara site na-eme nnyocha na-eme nnyocha, ọ na-eji data isi mmalite na e kere na-anakọtara site ulo oru na ọchịchị mere ihe masịrị ha dị ka inweta uru, na-enye a ọrụ, ma ọ bụ anamde ibọ a iwu. Ndị a azụmahịa na ọchịchị data isi mmalite na-na-akpọkwa ha oké data. Ime nnyocha na nnukwu data dị iche karịa ime nnyocha na data na e kere maka nnyocha. Tụlee ihe atụ, a na-elekọta mmadụ media website, dị ka Twitter, na a omenala echiche ọha na eze nnyocha e mere dị ka General Social Survey (GSS). Twitter bụ isi ihe mgbaru ọsọ ga na-eweta a ozi ya ọrụ na-eme ka a uru. Na usoro nke ọbọ a mgbaru ọsọ, Twitter emepụta data nke nwere ike bara uru n'ihi na amụ akụkụ ụfọdụ nke ọha na eze. Ma, n'adịghị ka ndị General Social Survey (GSS), Twitter bụ isi-elekwasị anya na-elekọta mmadụ nnyocha.
Okwu ahụ bụ nnukwu data bụ frustratingly-edochaghị anya, na ọ dị iche iche ọnụ ọtụtụ dị iche iche ihe. Maka nzube nke na-elekọta mmadụ nnyocha, m na-eche na ọ bụ na-enye aka ịmata ọdịiche dị n'etiti abụọ iche iche nke nnukwu data isi mmalite: ọchịchị administrative ndekọ na azụmahịa ndutịm ndia. Government administrative ndia bu data na-kere ọchịchị dị ka akụkụ nke ha na-eme eme. Ndị a iche iche ihe ndekọ na e ji eme nnyocha n'oge gara aga-dị ka demographers-amụ nwa, alụmdi na nwunye, na ọnwụ ndekọ-ma ọchịchị na-esiwanye obon na-atọhapụ zuru ezu ihe ndekọ dị na analyzable iche-iche. Dị ka ihe atụ, New York City ọchịchị arụnyere digital mita n'ime nke ọ bụla taxi ke obio. Ndị a mita dekọọ iche iche nke data banyere onye ọ bụla tagzi gụnyere onye na-akwọ, na mmalite oge na ebe a, na-akwụsị oge na ebe a, na ego ụgbọ. Na-amụ na m agwa mesịrị ke ibuot emi, Henry Farber (2015) repurposed ndị a data iji lebara a isi arụmụka na-amụ enweta ego banyere mmekọrịta dị n'etiti hour obula ụgwọ ọrụ ma na awa ole na-arụ ọrụ.
Nke abụọ isi ụdị nnukwu data na-elekọta mmadụ research bụ azụmahịa ndutịm ndia. Ndị a bụ data na azụmahịa ike na-anakọta dị ka akụkụ nke ha na-eme eme. Ndị a azụmahịa ndutịm ndekọ na-akpọkarị digital metụtara, na-agụnye ihe ndị dị ka search engine query ndekọ, na-elekọta mmadụ media posts, na-akpọ ndekọ si mobile phones. Critically, ndị a azụmahịa ndutịm ndia bu bụghị naanị banyere online omume. Dị ka ihe atụ, na-echekwa na-eji elele-esi scanners-na-eke ezigbo oge jikoro nke arụpụtaghị ọrụ. Na-amụ na m agwa gị banyere mgbe e mesịrị ke ibuot emi, Alexandre más na Enrico Moretti (2009) repurposed a ụlọ ahịa elele-esi data na-amụ otú a ọrụ 'arụpụtaghị na-impacted site na arụpụtaghị ndị ọgbọ ha.
Dị ka abụọ ndị a ihe atụ, echiche nke repurposing ihe dị mkpa iji na-amụta site na nnukwu data. Na m ahụmahụ, na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na data ọkà mmụta sayensị abịaru nso a repurposing nnọọ dị iche iche. Social ndị ọkà mmụta sayensị, ndị na-agba nkịtị na-arụ ọrụ na data mere maka nnyocha, na-adị ngwa tụọ nsogbu na repurposed data na-eleghara ya anya. N'aka nke ọzọ, data ọkà mmụta sayensị na-adị ngwa tụọ uru nke repurposed data na-eleghara ya adịghị ike. O kwesịrị ịdị, ihe kasị eme ga-abụ a ngwakọ. Ya bụ, na-eme nnyocha mkpa iji ghọta e ji mara ọhụrụ ndị a na isi mmalite nke data-ma ndị ọma na ihe ọjọọ-ma chepụta otú ịmụta n'aka ha. Na, nke ahụ bụ atụmatụ maka ndị fọdụrụnụ nke isiakwụkwọ a. Next, m ga na-akọwa iri nkịtị e ji mara azụmahịa na ọchịchị administrative data. Mgbe ahụ, m ga-akọwa atọ nnyocha na-eru nso na ike ga-eji na ndị a data,-eru nso na na-ọma ruru eru na-agwa nke a data.